Akunakwenzeka ukuthi kuyoba nabantu abangamazi lokho isifo, futhi okungenani kanye empilweni yakhe ebhekene nale sifo ngandlela-thile. Abaningi Kulimale ebuntwaneni, Ngakho-ke, ukukholelwa ukuthi imbangela stomatitis - lokungalandeli umthetho inhlanzeko. Phela, akuzona zonke izingane ezingase obhekene ukugeza izandla nokuhlukanisa abantu ngisho umama onakekelayo ngeke ukwazi ukuhlale ulawula inqubo yokuhlanzeka saziso. Nokho, umbono ukuthi lesi sifo elibuhlungu mucosa ngomlomo sici kuphela izingane, akulungile. Abantu abagulayo can ngasiphi yobudala, ngoba imbangela stomatitis - hhayi kuphela ukuba ningazinaki lezi imithetho eyisisekelo kwenhlanzeko.
Yiqiniso, evame kakhulu stomatitis kwenzeka abantwana zasenkulisa kanye ubudala wasesikoleni samabanga aphansi, njengoba izingane bavame ukukhohlwa ukugeza izandla zakho ngensipho ngemva emgwaqweni noma ukudla. Ngakho, ngo- the ngalo ingaphakathi ngomlomo uwela isisindo Amagciwane, abakucasulayo le mucosa. Futhi stomatitis kungenzeka futhi Abantu abadala kanye nezingane engaphezu kweminyaka engu-ukusetshenziswa abazi ukudla okubandayo ngokweqile noma kushisa, okubabayo kanye acid. ukudla okunjalo ecasula futhi kwenza kube ukungenwa amagciwane kanye amagciwane, futhi namanje imbangela stomatitis kuba sobala. Kunezikhathi lapho stomatitis kuzibonakalisa ngokushesha ngemva ukwelashwa kwamazinyo, njengoba imithi imithi esetshenziswa amazinyo for ofakwe lesikhashana izinzwa wendawo, asifanele wonke umuntu. imithi isikhathi eside, futhi labizwa ngokuthi imbangela stomatitis, ngoba ngaleso sikhathi, uhlelo yomuntu mzimba buthakathaka isifo, futhi awukwazi ukumelana nezilwanyana ezincane eziyingozi. The njalo kunazo stomatitis is phetho ekwelapheni scarlet fever, isimungumungwana ne-yezifo igazi isikhumba.
Canker - Izimpawu, Ukwelashwa
Ezimweni eziningi isizathu wukuqinisekisa ukuthi angasebenzi nezilwanyana ezincane abahlala ngaphakathi komgodi ngomlomo, bacale kutfutfukisa e evumayo attenuated umzimba flora. Esigabeni sokuqala, akha ifilimu emhlophe, bese ezindaweni eziminyene kakhulu ukubhubhisa ulwelwesi lwamafinyila, njengoba ukuguguleka kufakazelwa kanye nezilonda nge white side imiphetho. Futhi uma esikhathini sokuqala umuntu kuphela ahlangabezane ukungakhululeki, ke Izindawo ezithinteka kakhulu - izilonda, kubuhlungu. Kuvele uphawu ezengeziwe lesi sifo ukuxilonga esikhathini usaqala lymphadenopathy, okuyinto kuphakamisa ukungakhululeki yokugwinya futhi mastication.
stomatitis kanjani yingozi. Ikhaya Ukwelashwa
Naphezu ukwanda kwalesi sifo, okuthiwa lula yakhe kuyoba ngempela okungalungile. Ngempela, ngaphandle ubuhlungu ukugeleza, isifo, uma iyekwa ingelashwa, ingaholela nemiphumela eyingozi kakhulu. Sivulekile isilonda kuba lula futhi ngokushesha ukuze uthole ezihlukahlukene izifo ezibangelwa amagciwane, okuyizinto causative ejenti izifo ezibangela ukukhathazeka. Ngakho-ke, ekuqaleni uzokwazi ukuxilonga izifo, kuba lula ukuvimbela imiphumela engemihle.
Ezimweni eziningi, stomatitis akudingi impatho esibhedlela. Njengoba ojwayelekile, landela izincomo odokotela ngokucacile ngokwanele futhi ngesikhathi ukuthatha imithi. Kusebenta ukwelashwa sabonakala amakhambi ekhaya, ngaphandle lokhu ikakhulukazi ezimweni lapho imbangela stomatitis ehlanganiswa nezinye isifo noma buthakathaka amasosha omzimba. Excellent usizo propolis tincture, juice Aloe, decoction of chamomile, calendulakuva zikagamthilini.